musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeFrench Football Genius iyo inozivikanwa chete nezita racho "Nzonzi". Our Steven Nzonzi Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva kuti aive chikamu che 23 varume veFrance chikwata chakakunda mukombe wenyika ye2018 muRussia asi vashomanana chete vanofunga nezveBoven Nzonzi's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Kutanga zita rake rose ndiSteven N'Kemboanza Mike Nzonzi. Akazvarwa musi we 15th waDecember 1988 kuColombes, France kuvabereki vemarudzi akasiyana. Baba vake, Nzonzi Snr vanobva kuCongo apo amai vake vari veFrance.
Kukura mumuganhu weParis weColombes, Young Nzonzi aive nekutanga kwakanaka kwehupenyu pamwe chete neshamwari inofara nehanzvadzi mbiri uye hama. Kunyange zvakadaro, baba vake (avo vaizozofuratira kuti Steven aende kubva kumahombekombe pose paanonzwa ramangwana risina njodzi kumwanakomana wake) akamuita kuti azive kuti ramangwana ndeyevaya vanotora matanho ekutanga.
Kuziva kwakamuona akangotanga basa rake rebhora muCarise Paris panguva yekwereti ye 10 uye akamutungamirira mune zvishoma zvinowedzera zvishoma mumapoka evechidiki anosanganisira SC Levallois (1994-1999), Paris Saint-Germain (1999-2002) , CA Lisieux (2002-2003) uye SM Caen (2003-2004).
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Football Inofambira mberi
Steven Nzonzi akaramba asina kuzivikanwa kuburikidza nehuduku hwake huduku kuti atange kugadzirisa paakazobatana neC SC Amiens U19 club mu2005 uye akakurudzirwa kumakwikwi makuru emakwikwi mu2009.
Yaiva paS SC Amiens iyo Nzonzi yakaratidza hutano hwakanaka hwehutano hwakagadzira nyika yake yeRwanda Congo, France neEngland kutsvaka kuchengetedza mabasa ake kune tende ravo rose. Nzonzi akatendeuka ose pasi asi France uye akaita kuti aende kune dzimwe nyika pasi rose neFrench pasi-21 team mu2009.
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Simuka Mukurumbira
Achienderera mberi nekambani yemakwikwi emabasa, Nzonzi akapfuurira kusvika kuBlackburn uko haana kuita zvishoma. Pakupera kwemwedzi we2011-2012, akabatana neSwitke muguta ndokuisa chiitiko chinoshamisa chakamuwana iye 2014-15 Player weMugore wegore asati asvika kuSevilla mu2015.
KuSevilla, Nzonzi akavandudza uye akachengetedza fomu yake yepamusoro, achikunda UEFA Europa League mu2016 nekambani uye akaitawo UEFA Europa League Squad yeChirungu.
Kuti aite zvose zvaakakumbirwa kukoka kutamba kuFrance National Team muRussia 2018 Fifa World Cup iyo yaive yakachengetedza pamwe chete ne23 varume. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Nzonzi haana kumbova neukama hwehukama nekuda kwezvikonzero zvisingakwanisi kudzora. Gara shure apo tinokutora iwe pane rwendo rwokuti akarasikirwa nerudo mukati memakore matatu.
VaFrench vese vaiva neS Stoke City paakaroorana naye iye zvino mukadzi akasiyana, Lynda Nzonzi mu2013 mushure memwedzi yekufambidzana yakachengetwa yakavanzika. Zvose zvakaonekwa zvakanaka nemhuri yavo iyo yakakomborerwa neAyden mwanakomana. Mwedzi 4 mushure mokuberekwa kwemwanakomana wavo, Nzonzi akamira mucheche redzimhosva mushure mokunge mudzimai wake akamupomera mhosva yekumurova pamberi pecheche wavo kumudana kuti 'Dady asina maturo'.
Kutaura nemhosva yaNzonzi yakasimbisa kuti iye chete aingoedza kuvhara mudzimai wake (uyo ainge aonekwa aine hasha) nekubata mazamu ake mushure mekunge ataura naye sekusina maturo pahurukuro yefoni naamai vake
Nzonzi kudzivirira akafamba zvakanaka nevatongi veSouth Cheshire vakamubvisa kurwisa. Rimwe zuva mushure mekutongwa kwaiitwa Lynda kurambana neNzonzi kusimbisa kupatsanurwa nekucherechedza kuti imba yavo yainge 'yaputsika zvisinganzwisisike'.
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Kuenzanisa naPatrick Vieira
Steven Nzonzi ave apedza nguva, achifananidza nheyo yeArsenal Patrick Vieira nevakawanda kusanganisira Spanish Press. Kuongorora kwakanyatsonaka kwekuenzanisa kunoratidza kuti havasati vanyatsogadziriswa uye kunyanya kukoshesa panguva yeiyo post apo Vieira akagadzirirwa kusiya Sevilla kweArsenal.
Patrick Vieira, iye zvino ari muteja weNiece yaiva nheyo yebhora yakashanda zvakanaka paAssenal semukati wepakati, nzonzi yaive yakagadziriswa pachake. Kubva kubva paViira kubva mubato mu2005, Arsenal iri kuramba ichiwana zvakaoma kuwana midzi midzi uyo ane chizere chakazara cheAieira simba rave rakawanikwa muNzonzi.
Mukuwedzera, Zvose Vieira neNzonzi vane mifananidzo yakareba uye yekare yaiva nehupamhi hwe1.93m uye iyo yekupedzisira inotarisa chiduku ne 1.96m !. Kuti uone zviri zviviri zvose zvakakunda mukombe wenyika yeFIFA neFrench National Team.
Zvisinei, Nzonzi haafungi kuti anoenzanisa nheyo sezvaanoti:
Ndiri kure, ndinotamba nzvimbo imwechete uye ndine mutevedzeri wechiFrench zvakanyatsojeka, iwe unogona kuenzanisa asi ini handizivi kuti rakanaka nokuti zvichange zvakaoma kufanana nezvakaitwa, '
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Kushamwaridzana Kusingabatsiri
Kunyange zvazvo Nzonzi ainge aita zvakawanda kuti asave nemakakatanwa, zviito zvake mushure meSevilla 5-0 kunyadziswa neBarcelona muSpean Cup yokupedzisira mu2018 kwakaita kuti vatsva vazive kuti kutendeka kwake kuripi. Sevilla akanga ashanda zvakaoma zvakaoma kuti asvike pakupedzisira kweSpain Cup yokupedzisira chete kuti arohwa neBarcelona ane chikamu chechikwata chakaita kuti klabhu ibve seisina simba.
Pakupera kwemutambo, Nzonzi akanganisa pazvikamu zviviri, Kutanga kwaiva kukaramba kwake kutenda mafani nekuda kwekufambisa kwavo mutsigiro wose kuburikidza neSpanish cup campaign uye imwe, iyo yakaita kuti kutsamwa kuve kusarudza kwake kupembera paMadrid nightclub pazuva rutivi rwakanga rwabatwa zvakanyanya.
Achiziva ruuckus inokonzerwa nesarudzo yake iyo vazhinji vakatsanangura sevasingafungi, Nzonzi iyo yakamutora yakaisa muSevilla's tracksuit (kutadza kunoshamisa kuti aratidze kuvimbika kwake) kureva kukumbira ruregerero rwaiti:
"Ndinoda kukumbira ruregerero kune vatevedzeri veSevilla," NZonzi akati. "Ndakakanganisa nokuti ndakasiya mushure mokutamba. Zvakaitika zvakare zvakaoma kune vatambi. Tiri kutamba mazuva ose matatu, ndinogara ndiri ndoga, ndinodzidzisa uye ndinodzokera kumusha. Ndinogara ndiri pamba. Dzulo mhuri yangu neshamwari dzakanga dziripo uye ini ndakabva. "
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukama neMwanakomana
Steven Nzonzi akaenderera mberi kuchengetedza ukama hwepedyo hwebaba nemwanakomana wake, Ayden pasinei nekuputsa kwewanano. Baba vanozvikudza avo vasati vawana humwe hukama huripo havasi kurega kutora mapikicha anodiwa-iye nemwanakomana wake kusanganisira pfuti inomuita kuti apemberere vashandi vake veHome Cup neAyden.
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Personality Facts
Unhu hwaNzonzi hwakasiyana-siyana hwokuti munhu haakwanisi kusvika pakuguma maererano neiye iye chaizvoizvo. Kunyange zvakadaro, Nzonzi akajekesa kuti kazhinji anoratidza kuratidzira kwakadzikama kunze kwechimiro uye kushushikana kwepfungwa pamunda wekutamba.
'Ndakanga ndasara-shure muhupenyu asi pamhara, ndinogona kunyatsogumburwa uye kunzwa, kune musiyano mukuru. Ini ndiri kunyanya kunetseka pandiri, nguva dzose ndakange ndiri. Handidi kushayiwa. Ndinozvidzora zviri nani ikozvino asi zvakadaro, dzimwe nguva ndinogumburwa zvikuru nokukurumidza. '
Steven Nzonzi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Other Facts
Nzonzi aigara achirota zvekutamba mumakwikwi emakwikwi, kurota kunotarisa kubudirira sezvo achiisa zvikepe zvekushandisa arsenal.
Apo Nzonzi akanga ari kuStoke City akafukidza 134miles mumitambo ye19, kureva kwakamusiyanisa kubva kune vamwe vatambi.
Nhoroondo dzake dzezvemagariro evanhu dzinotungamirirwa nehupenyu hwake hupenyu.
Anotsigira kuti zita rake rakanyorwa seNzonzi, kwete NeZonzi
CHOKWADI CHINOGONA: Tinovonga nekuverenga Steven Nzonzi Childhood Indaba yedu pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!